Maamulka KGS oo mar kale amaro dul dhigay Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta Maamulkaasi | Radio Danan (DBN) 94 FM
Home / WARARKA / Maamulka KGS oo mar kale amaro dul dhigay Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta Maamulkaasi
Maamulka KGS oo mar kale amaro dul dhigay Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta Maamulkaasi
Posted by: DBN in WARARKA October 11, 2017	Comments Off on Maamulka KGS oo mar kale amaro dul dhigay Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta Maamulkaasi
RADIO DANAN:- Waxaa sii kor dhaya amarada is daba jooga ah ee ka soo baxaya madaxda Maaamulka Koon fur Galbeed soomaaliya.
Shalay oo ay Talaado ahayd Saraakiisha ciidmada iyo Madaxda sare ee maamulka waxa ay amaro dul dhigeen Siyaasiyiinta iyo saxafiyiinta ka howlgala baydhabo oo ah halka looga arimiyo Koonfur Galbeed iyaga oo sheegay in la mamnuucay qabashada shirarka aysan ka warqabin Wasaarada arimaha gudaha iyo in saxaafada aysan warka qaadi Karin cid walba oo dooneysa inay dhaliisho Koonfur Galbeed.
Nuuradiin Yuusuf Abuukar Gacma afhayeenka Maamulkaasi oo la hadlay B Guuxa Wararkka ayaa sheegay in sidoo kale amaro la duldhigay Xildhibaanada Baarlamaanka Koonfur Galbeed Waxa uuna Xusay in iyaguna uu qabanayo amarada la soo saaray isaga oo hoosta ka xariiqay in xildhibaanada laftooda aysan qaban Karin kulamo aysan u haysan fasax Ka soo baxay Wasaarada arimaha Gudaha Koonfur Galbeed somaliya.
Dhinaca kale afhayeen Nuuradiin Gacma oo sii hadlayay ayaa shaaciyay in ujeedka laga leeyay amaradaasi ay yihiin sidii looga shaqeyn lahaa hormarka deegaanka M/mul Goboleedkaasi iyo guud ahaan dalka somaliya oo uu xusay in waqti dheer bur bur uu ku soo jiray .
Amarkan ka soo baxay laamaha amniga iyo xmadaxda ugu sareysa koonfur galbeed ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa la doonayo in lagu xakameeyo xildhibaanada Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin ka soo hor jeeda shariif xasan sh aadan kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay kulamo gooni gooni ah ku yeelanaya baydhabo halka saxaafadana lagu waramayo in loo diidanyahay inay gudbiyaan waxyaabaha dhinacydaasi ay ka hadlaan .
Previous: Maxaa laga filanayaa Kismaayo saacadaha soo socda?
Next: Dhagayso:- Warka Subax ee Idaacadda Danan 11/10/2017